UMokwena uthi bakulungele ukubhekana nePirates - Impempe
UMokwena uthi bakulungele ukubhekana nePirates
December 31, 2020 Impempe.com
Umdlalo wokuvula unyaka weDStv Premiership phakathi kweMamelodi Sundowns ne-Orlando Pirates akungabazeki neze ukuthi uzodla ngokushuba.
Umdlalo useLoftus Versfeld Stadium, ePitoli, ngoMgqibelo ngo-3.30 ntambama.
Nokho umqeqeshi weSundowns, uRulani Mokwena, ukholwa wukuthi kulikhuni satshe ukulingiselela lo mdlalo njengoba abadlali bebesekhefini elincane likaKhisimusi.
“Yebo amalungiselelo abehamba kahle kakhulu. Siyethemba ukuthi singaba nesikwati esiqinile ukuze sikhethe kahle abadlali abafanelwe umdlalo. Yisikhathi esinzima ukuzama ukwenza izinto ngendlela esifuna ngayo. Sinike abadlali isikhathi sokuphumula nokuba nemindeni yabo ngoKhisimusi. Sizamile ukuthi abadlali bazigcine beyimiqemane futhi babuye bebukeka kahle impela,” kusho uMokwena.
AmaBrazilians aya kulo mdlalo ezihola phambili kwi-log yePremiership. IPirates isendaweni yesihlanu.
“Sizama ukulungiselela iPirates ngokomqondo. Yize kunzima kunjalo kodwa sinakho ukuzethemba futhi siwubheke ngabomvu umdlalo wethu olandelayo. Asilona iqembu elikhalela ukuthi abadlali abathile abekho. Sibusisiwe ngokuba nabadlali abasezingeni eliphezulu abaningi eqenjini lethu. Lokhu kusinika ithuba elikahle lokuqoka abadlali,” kusho uMokwena.
Uthe ngeke kube yinto ewumqondo ophusile ukuvele bashintshe iqembeueliqala umdlalo ngoba asikho isidingo.
“Baningi kakhulu abantu abafake injabulo yabo endleleni edlala ngayo iSundowns. Ngakho kungaba ukugagamela ukuvele senze ushintsho,” kusho uMokwena.
“Nokho iqiniso ukuthi sibuye siphoqekele ukudlala ngendlela ehlukile emidlalweni ehlukahlukene. Nokho asikhonondi ngakho ngoba sinabadlali abasezingeni eliphezulu. Sisenenkinga nokho ngabadlali abalimele. Kumele siqaphele ngoba sisephakathi kweCoronavirus, futhi lokho yinto esiyithatha ngendlela okumele siyithathe ngayo, ebalulekile.”
UMokwena uthe kulabo abacabanga ukuthi bayakujabulela ukulokhu beshintsha iqembu, akukhona lokho kodwa babhekene nesimo esinzima.
“Siyakholelwa eqenjini lethu futhi ukungabi khona kwabanye abadlali kunika ithuba abanye abadlali. Ukubuka ukuthi abadlali abafana noMthobi Mvaba sebenzeleni iqembu, kuhle kakhulu. UMthobi useshayele iqembu amagoli amabili emidlalweni emibili futhi uyakhombisa ukuthi ukulungele ukudlalela iSundowns. Okubalulekile ukuthi siqhubeke nokuthi sifake abadlali abangu-11 okuyibona esibabona ukuthi kufanele baqale umdlalo kwiSundowns,” kubeka uMokwena.
Previous Previous post: ‘Usilimaze kakhulu u-2020 singabagijimi,’ kusho uMbuthuma
Next Next post: UHlatshwayo uwubheke ngabomvu umdlalo weDowns neBucs